विरोधी नेतालाई जेल हाल्ने तयारीमा ओली, ओलीको दुवै पद खोस्ने रणनीतिमा प्रचण्ड पक्ष (भिडियो) – Halkhabar kura
८ मंसिर २०७७, सोमबार १०:३१
विरोधी नेतालाई जेल हाल्ने तयारीमा ओली, ओलीको दुवै पद खोस्ने रणनीतिमा प्रचण्ड पक्ष (भिडियो)
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको अन्तरसंघर्ष थप उत्कर्षमा पुगेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्काअध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असन्तुष्टि पत्र बुझाएसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि नेताहरुको गुटगत असन्तुष्टि एकले अर्कालाई कटाक्ष गर्दै सार्वजनिक भएपछि नेकपामा संकट गहिरिँदै गएको छ ।
नेकपाको बढ्दो अन्तरसंघर्षलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग सत्ता साझेदारको प्रस्ताव राखेको खुलासा भएको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा भएको दुईजनाको भेटघाटमा ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई आठ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेका छन् । देउवाले सहयोगीहरुसँग सल्लाह गरी उचित निर्णय लिने आश्वासन ओलीलाई दिएको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले बातए ।
प्रचण्डले पहिलेदेखि नै दुःख दिएको र अहिले त्यसमा माधव नेपाल पनि मिसिएपछि आफू संकटमा परेको भन्दै सहकार्यको प्रस्ताव देउवा समक्ष ओलीले राखेको स्रोतले बतायो । देउवाले तत्काल कोरोना नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न पनि ओलीसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ।
साथै ओलीले आफ्नो चालु कार्यकाल पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुबै पदमा नदोहोरिने पटक-पटक बताउँदै आएका छन् ।
अब सरकार र पार्टी दुबैको नेतृत्व पुराना नेताहरुले नलिई ‘नयाँ’लाई दिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका बैठक र सार्वजनिक फोरमहरुमा बताउने गरेका छन् ।
पहिल्यै प्रधानमन्त्री भइसकेका वा पार्टीको प्रमुख चलाइसकेका नेताहरुले अब नयाँ उमेर समूहको पिँढीलाई अवसर दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो प्रस्तावले नेकपाभित्र विस्तारै नयाँ ‘डिस्कोर्ष’ शुरु गराउन थालेको देखिन्छ ।
थप जानकारीका लागि भिडियो हेर्नुहोस् ।
Previous अध्ययन भन्छ- एकपटक कोरोना सङ्क्रमण भएकाहरु कम्तीमा ६ महिनासम्म सङ्क्रमित नहुने
Next कुन खानासँग के खाने, के नखाने ? के हामी खाना खान जान्दछौं ?
पूर्वराजाको सन्देशले बिच्किएका नेता भट्टराईले गणतन्त्र स्वीकार गर भन्दै पूर्वराजालाई दिए चेतावनी
२६ आश्विन २०७८, मंगलवार १७:३३